Etu Otu Weebụ Slow gị si emebi azụmahịa gị | Martech Zone
Ọtụtụ afọ gara aga, anyị nwere kwaga saịtị anyị na onye ọbịa ọhụrụ mgbe onye nwe anyị ugbu a malitere ịmalite nwayọọ na nwayọ. Ọ dịghị onye chọrọ ịgbanwe ụlọ ọrụ nnabata… ọkachasị onye na-akwado ọtụtụ weebụsaịtị. Mbugharị nwere ike ịbụ usoro na-egbu mgbu. Wezụga ọsọ ọsọ ọsọ, Flywheel nyere onyinye Mbugharị n'efu ọ bụ mmeri-mmeri.
Enweghị m nhọrọ, n'agbanyeghị na enyere m ntakịrị ọrụ m na-arụ bụ ịkwalite saịtị maka ndị ahịa ndị ọzọ. Ọ naghị adị oke mma ma ọ bụrụ na saịtị m anaghị arụ ọrụ ngwa ngwa! Nke ahụ kwuru, ọ bụghị naanị na ọ metụtara m dịka ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-emetụta gị.
Inyocha ọsọ ọsọ weebụ gị nwere ike ọ gaghị abụ isi dị mkpa mana nke ahụ bụ naanị ruo mgbe ị chọpụtara ọnụego bounce ma ọ bụ ọnụego ịhapụ maka ụgbọ ibu azụmahịa gị. Ntughari gị na ego mgbasa ozi na-agbada nwayọ na-enweghị usoro na-arụ ọrụ nke ọsọ ọsọ weebụsaịtị gị.
Gị na saịtị ahụ ọsọ bụ a Nchikota gị Bochum na ihe ndị ọzọ. Na tupu na-elele nnabata, ị kwesịrị ị na iyuzucha optimizing ihe niile… wee lee gị mba. Ọsọ saịtị anaghị emetụta omume onye ọrụ, ọ nwere mmetụta dị ala na obere ihe ole na ole:
Ọnụego mgbanwe - 14% nke ndị ọbịa gị ga-azụ ahịa ebe ọzọ ma ọ bụrụ na saịtị gị adịghị nwayọ.
Ọnụego njigide - 50% nke ndị ọbịa na-ekwu na ha agaghị eguzosi ike n'ihe nye weebụsaịtị ndị ga-ewe ogologo oge.
Enginenye ọkwa njin ọchụchọ - Search engines chọrọ ịchụ ndị ọbịa na saịtị ndị na-enye nnukwu ahụmịhe onye ọrụ. Enwere otutu ọmụmụ ihe na-egosi na ọsọ saịtị bụ ihe na-akpata (Google ekwuola) yana n'ihi na ndị mmadụ na-anọ na saịtị ngwa ngwa, ọ bụ ihe na-enweghị isi.
mpi - Ọbụna ụzọ aghụghọ dị iche iche nke saịtị dị n'etiti gị na onye asọmpi nwere ike ịgbanwe echiche nke ụlọ ọrụ ha na nke gị. Ndị na-azụ ahịa na atụmanya azụmahịa na-agagharịkarị n’etiti saịtị ndị na-ere ahịa… bụ nke gị karịa ndị na-asọ gị?
Kedu ihe bụ ọsọ saịtị?
Ezie na na ada dị ka mfe ajụjụ… ọ bụ otú ngwa ngwa gị website ibu… ọ bụ n'ezie bụghị. Enwere ọtụtụ ihe na - emetụta ọsọ nke ibe:
Oge Nke Mbụ (TTFB) - Nke a bụ otu ngwa ngwa webserver gị na - aza ngwa ngwa ahụ. Onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere akụrụngwa dara ogbenye nwere ike ịnwe nsogbu esemokwu nke nwere ike iwe obere oge maka saịtị gị iji zaghachi… echefula kpamkpam.
Ogologo aka na nnabata web - Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, anụ ahụ dị anya site na saịtị gị gaa na onye ọbịa gị. Ndị ụlọ ọrụ na-ejikarị a Nzipu Nwepụta ọdịnaya iji nyere aka kpuchie ala ha ka ndị mmadụ nọrọ n'ihu onye ọbịa ahụ nwee ahụmịhe ngwa ngwa.
Mmecha Peeji - Ibe akwukwo gi nwere ike zuru oke mana o nwere ihe ndi ozo etinyere mgbe emechara akwukwo a. Iji maa atụ, enwere otu umengwụ loading Njirimara na sistemụ njikwa ọdịnaya nke oge a ebe anaghị arịọ ihe oyiyi ma ọ bụrụ na ọ bụghị na mpaghara a na-ahụ anya nchọgharị na-ele anya. Ka mmadụ na-aga, na-arịọ ihe oyiyi ahụ ma gosi ya.
Gị Bochum Okwu
Kwụ ụgwọ ego ole na ole nwere ike ime nnukwu ọdịiche ma a bịa na nnabata web.
Ihe nhazi ikpo okwu ochie nwere ike na-agba ọsọ na sava ochie ma na-agbagharị akụrụngwa ma ghara ịkwalite. Dika teknụzụ ọhụrụ chọrọ mgbakwunye ndị ọzọ, saịtị gị na-adị nwayọ nwayọ nwayọ n'ihi akụrụngwa ochie ha.
Enwere ike ịkekọrịta nnabata gị na ndị ahịa ndị ọzọ. Dị ka ndị ahịa ndị ọzọ na-eri ihe onwunwe, saịtị gị na-eji nwayọ nwayọ. Ọhụrụ teknụzụ Bochum nwere ike ịmachi ihe onwunwe maka saịtị ma ọ bụ akaụntụ ọ bụla ka ndị ọzọ ghara ịmetụta gị.
Teknụzụ nnabata ọhụụ na-ejikọtakarị akụrụngwa maka mkpuchi na netwọọdụ nnyefe ọdịnaya.
Ka anyị mee mgbakọ na mwepụ. Na-akwụ ụgwọ $ 8 kwa ọnwa maka weebụsaịtị dị ọnụ ala na onye asọmpi gị na-akwụ $ 100. Have nwere 1000 ndị ahịa na-emefu $ 300 gị na ihe karịrị nke afọ. N'ihi na saịtị gị dị nwayọ, ị na-efunahụ 14% nke ndị ọbịa gị na onye ahịa gị.
I kwenyere na ị na-echekwa $ 92 kwa ọnwa, otu ego kwa afọ nke $ 1,104. Woohoo! Mana n'ezie, ị na-efunahụ ndị ahịa 140 x $ 300 kwa otu i fuola $ 42,000 n'achụmnta ego iji chekwaa ego ole na ole na ntanetị weebụ gị.
Chei! Ndi bekee… emela skimp na web hosting!
Ntọala Weebụ agbakọtala ihe omuma a, Otu Weebụsaịtị Slow gị na-agba otu oghere n’akpa gị, iji nye ndị otu gị eziokwu dị mkpa iji kpalie nzukọ gị na ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ were otu ndị ọkachamara ga - enyere gị aka ịkwalite saịtị gị ugbu a. Okwesighi ịbụ ihe dị oke ọnụ. N'ezie, anyị chebere ego na onye ọhụụ ọhụrụ anyị!
Tags: agbahapụ agbahapụnjikarịcha ecommercearụmọrụ ecommercenyochaa eziokwunjikarịcha saịtịFormancerụ Ọrụ Ntanetịọsọ ọsọngwa ngwa mbangwa ngwa websitengwa ngwa weebụsaịtịoge na mbụ byteọsọ weebụ